ကျွန်ုပ်၏ တက်ဘလက် ဘက်ထရီ သက်တမ်း တိုသည် | HUAWEI မြန်မာ အထောက်အပံ့
အာမခံကာလ နှင့် အထောက်အပံ့ ဝန်ဆောင်မှု ကို စုံစမ်းခြင်း
အပိုပစ္စည်း ဈေးနှုန်း စုံစမ်းခြင်း
ကျွန်ုပ်၏ တက်ဘလက် ဘက်ထရီ သက်တမ်း တိုသည်
သက္ဆိုင္ေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ား： Tablet
သင့်အတွက် အောက်ပါရလဒ်များကို တွေ့ရှိရပါသည်။ ကျေးဇူးပြု၍ ရွေးချယ်ပေးပါ။
ရလဒ်ကို ရှာဖွေ၍မရပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ ပြန်လည်ရွေးချယ်ပေးပါ။
သင့်တက်ဘလက်၏ ဘက်ထရီ သက်တမ်းသည် ဘက်ထရီ စွမ်းအားနှင့် သင် အသုံးပြုပုံအလိုက် ပြောင်းလဲသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့် ဘက်ထရီ စွမ်းအားမြင့်လေ ဘက်ထရီ သက်တမ်း ကြာလေ ဖြစ်သည်။ စွမ်းအားတူသော ဘက်ထရီများအတွက်ပင် အမှန်တကယ် ဘက်ထရီ သက်တမ်းသည် သင့် အသုံးပြုပုံပေါ် မူတည်သည်။
နှိုင်းယှဉ်ရလျှင် ဂိမ်းကစားခြင်းသည် ဗီဒီယို ကြည့်ခြင်းထက် ပါဝါ ပိုသုံးပြီး ဗီဒီယို ကြည့်ခြင်းသည် သီချင်း နားထောင်ခြင်းထက် ပါဝါ ပိုသုံးသည်။ ထို့ပြင် သင် ပါဝါ-သုံးလွန်းသည့် အက်ပ်များကို အသုံးပြုလျှင် သို့မဟုတ် ရှုပ်ထွေးသော လုပ်ဆောင်ချက်များကို ဆောင်ရွက်လျှင် ပါဝါ သုံးစွဲမှု မြင့်တက်လာမည်။
နောက်ခံတွင် အက်ပ် အရေအတွက်များစွာ လုပ်ဆောင်ခြင်းက သင့်တက်ဘလက်၏ ပါဝါ သုံးစွဲမှုကို မြင့်တက်စေသည်။
တက်ဘလက်၏ အသံပမာဏနှင့် မျက်နှာပြင် တောက်ပမှုတို့ကို မြင့်အောင် သတ်မှတ်ထားလေ တက်ဘလက်က ပါဝါ ပိုသုံးလေ ဖြစ်သည်။
သင်သည် အက်ပ်များ၊ GPS တည်နေရာ ရှာဖွေသတ်မှတ်မှု၊ HD သတ်မှတ်မှုကို ဖွင့်ထားပြီး ဖရိန် နှုန်း အမြင့် သတ်မှတ်ထားလျှင် သင့်တက်ဘလက်၏ ဘက်ထရီ သက်တမ်း တိုပါမည်။
ထို့ပြင် လိုင်း ဆွဲအားနည်းသော ဧရိယာများတွင် သင့်တက်ဘလက်သည် ကွန်ရက် မကြာခဏ ရှာမည် ဖြစ်သောကြောင့် ပါဝါ သုံးစွဲမှု ပိုလာပါမည်။
ကျွန်ုပ် တက်ဘလက်၏ ဘက်ထရီ သက်တမ်း ကြာအောင် ဘယ်လို လုပ်မလဲ။
သင် ဂိမ်းကစားချိန် သို့မဟုတ် ဗီဒီယို ကြည့်ချိန်တွင် ဘက်ထရီ သက်တမ်း တိုလျှင် ၎င်းကို ကြာရှည်ခံအောင် အောက်ပါတို့ကို ပြုလုပ်ပါ-
1. အခြေအနေပြဘားကို ပြသရန် သင့်တက်ဘလက်၏ ပင်မ မျက်နှာပြင်ကို အောက်သို့ ပွတ်ဆွဲပြီးနောက် သင့်တက်ဘလက်၏ မျက်နှာပြင် အလင်းတောက်ပမှုကို လျှော့ချရန် ဆလိုက်ဒါကို ချိန်ညှိပါ။
2. မကြာမီက အလုပ်များ မျက်နှာပြင်သို့ ဝင်ရောက်ပြီး နောက်ခံတွင် လုပ်ဆောင်နေသော မလိုအပ်သည့် အက်ပ်များကို ရှင်းပစ်ပါ။
မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် ညာဘက် သို့မဟုတ် ဘယ်ဘက်သို့ ပွတ်ဆွဲပြီး သင် မလိုအပ်သော အက်ပ်များပေါ်တွင် အထက်သို့ ပွတ်ဆွဲပါ။
3. အသံ မြှင့်ထားခြင်း၊ HD သတ်မှတ်ခြင်း သို့မဟုတ် ပုံရိပ်ကြည်လင်ပြတ်သားမှု မြင့်ခြင်းနှင့် GPS ကဲ့သို့ ပါဝါသုံးစွဲမှု မြင့်သော လုပ်ဆောင်ချက်များကို ပိတ်၍ အက်ပ် ဆက်တင်ကို ချိန်ညှိပါ။
နေ့စဉ် အသုံးပြုစဉ် ဘက်ထရီ သက်တမ်း တိုလျှင် ၎င်းကို ကြာရှည်ခံအောင် အောက်ပါတို့ကို ပြုလုပ်ပါ-
1. သင် မလိုအပ်သော နောက်ခံ အက်ပ်များကို အချိန်မှန် ရှင်းပစ်ပါ။ ဤသို့ ပြုလုပ်ရန် မကြာမီက အလုပ်များ မျက်နှာပြင်သို့ ဝင်ရောက်ပြီး ရှင်းလင်းရေး အိုင်ကွန်ကို နှိပ်ပါ။
2. ဆက်တင် > အသိပေး အချက်ပြမှု စင်တာ > အသုတ်လိုက် စီမံခန့်ခွဲမှု သို့ သွားပါ၊ အသုတ်ထဲရှိ အက်ပ်များအတွက် အသိပေး အချက်ပြမှုများကို ပိတ်ပြီးနောက် ၎င်းအစား အက်ပ်အချို့အတွက် အသိပေး အချက်ပြမှုများကို ဖွင့်ပါ။
3. မျက်နှာပြင် အလင်းတောက်ပမှု မြင့်ခြင်း သို့မဟုတ် ပုံရိပ်ကြည်လင်ပြတ်သားမှု မြင့်ခြင်းက သင့်တက်ဘလက်၏ ပါဝါ သုံးစွဲမှုကို မြင့်တက်စေမည်။ ဆက်တင် > ပြသမှုနှင့် လင်းထင်းမှု သို့သွားပြီး အလိုအလျောက် နှင့် စမတ် ရီဆိုလူးရှင်း ကို ဖွင့်ပါ။
4. ပါဝါ ချွေတာရေး စနစ် ကို ဖွင့်ပါ။ သင့်တက်ဘလက်တွင် ပါဝါ ချွေတာရေး စနစ် နှင့် ပါဝါလွန်ကဲချွေတာရေး စနစ် အပါအဝင် ပါဝါချွေတာရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော စနစ် နှစ်မျိုး ပါသည်။ သင် လိုအပ်သည့် တစ်ခုကို ရွေးချယ်ပါ။
ဤပြဿနာ ဆက်ရှိနေပါက အကူအညီ ရယူရန် အရေးကြီး ဒေတာများကို ဘက်ခ်အပ်လုပ်ပြီး သင့်စက်နှင့် ဝယ်ယူမှု သက်သေကို တရားဝင်ခွင့်ပြုချက် ရထားသော Huawei သုံးစွဲသူ ဝန်ဆောင်မှုစင်တာ သို့ ယူလာပါ။
အသုံးဝင်သည် သို့မဟုတ် မဝင်ပါ။